Madaxweynaha Tansaaniya ayaa dejinaya qorshe dib -u -habeyn dalxiis oo ballaaran
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Madaxweynaha Tansaaniya ayaa dejinaya qorshe dib -u -habeyn dalxiis oo ballaaran
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Tansaaniya Samia Suluhu Hassan ayaa bilowday barnaamij dokumenti documentary ah oo ku saabsan dalxiiska kaasoo daaha ka rogi doona Tansaaniya ka hor suuqyada dalxiiska adduunka, oo lagu beegsanayo inay soo jiitaan dalxiisayaal badan iyo maalgashiyo dalka ka dhaca.
Barnaamijka dokumentariga ah ee “Royal Tour” oo hadda la bilaabay ayaa lagu duubi doonaa meelo kala duwan oo Tansaaniya ah.
Socdaalka, Madaxweynuhu wuxuu ku biiri doonaa booqdayaasha lafteeda markaasna ka qeyb qaadan doona si loo diiwaangeliyo socdaalka si loo diro iyo wareegga caalamka.
Duubista dokumenteriga loogu talagalay in lagu hormariyo Tansaaniya si caalami ah ayaa ka bilaabmay Ogosto 28, 2021, Zanzibar halkaas oo uu Madaxweynuhu hadda ku joogo booqasho rasmi ah.
Dukumintiga dalxiiska waxaa lagu duubi doonaa Guddoomiyaha guddiga Madaxweynaha oo isku dubaridi doona qorshaha kor loogu qaadayo Tansaaniya si caalami ah oo ah Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka, Fanka iyo Ciyaaraha.
“Madaxweynuhu wuxuu tusi doonaa booqdayaasha dalxiisyo kala duwan, maalgashiyo, farshaxan, iyo soojiidashada dhaqameed ee laga heli karo Tansaaniya,” ayaa lagu yiri qeyb ka mid ah bayaankii ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Tanzania. Barnaamijka Royal Tours waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo xiriirka ka dhexeeya Tansaaniya iyo quruumaha kale, sidoo kale lagu dhiirrigeliyo dalxiiska iyo iskaashiga safarka ee u dhexeeya Tansaaniya, quruumaha kale, iyo ururada.
Madaxweyne Samia ayaa sheegtay in dowladdu ay bilowday istiraatiijiyado gardaro ah oo ay ku astaynayso dalka iyada oo kor u qaadeysa fursadaha dhaqaale ee jira ee caalamka. Ka dib markii ay qabatay xafiiska ugu sarreeya Tansaaniya bishii Maarso ee sannadkan, Madaxweyne Samia waxay sheegtay in dawladdeeda ay filayso inay kor u qaaddo tirada dalxiisayaasha hadda ah 1.5 milyan illaa 5 milyan oo soo booqda 5 -ta sano ee soo socota.
Isla xariiqdaas, dawladdu waxay filaysaa inay kor u qaaddo dakhliga dalxiiska ee hadda ah $ 2.6 bilyan illaa 6 bilyan oo doollar isla muddadaas, ayay tidhi. Si ay u gaarto bartilmaameedyadeeda la qorsheeyey, dawladdu hadda waxay soo jiidanaysaa maalgashiyada hoteelka iyo dalxiiska iyada oo la ballaadhinayo goobaha booqashada dalxiiska, inta badan goobaha taariikhiga ah iyo xeebaha badda, oo ka mid ah goobo kale oo aan mar hore si buuxda loogu horumarin si loo soo jiito dalxiisayaasha.
Tansaaniya ayaa sidoo kale tilmaami doonta waddamada istiraatiijiga ah si ay u suuqgeeyaan dalxiiskeeda iyada oo u sii marineysa xafiisyada diblomaasiyadeed iyo safaaradaha iyada oo si xoog leh u suuqgeynaysa alaabteeda safari heer caalami ah. Dib -u -eegista canshuuraha mamnuuca ah ee dalxiiska, oo looga golleeyahay in laga yareeyo maalgashadayaasha canshuurta iyo culeyska dakhliga ayaa sidoo kale la tixgelin doonaa.
Shirka, xeebta, iyo alaabada dalxiiska ee dhaxalka ah, iyo sidoo kale maraakiibta dalxiiska ayaa ah meelaha laga yaabo inay u baahan yihiin horumar iyo suuqgeyn si ay u soo jiitaan dalxiisayaal badan iyo maalgelinta safarka - badiyaa hoteellada, gaadiidka hawada, iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Horumarinta seerayaasha qaranka ee cusub ee Galbeedka Tansaaniya ayaa la filayaa inay kor u qaado dalxiiska aagga Harooyinka Weyn, oo caan ku ah chimpanzees iyo gorillas dhex mushaaxaya inta u dhaxaysa Tanzania, Uganda, Rwanda, iyo DR Congo. Seerayaasha cusub ayaa sidoo kale la filayaa inay sidoo kale kor u qaadaan dalxiiska gobolka iyo Afrika dhexdooda ah ee u dhexeeya Tansaaniya, Uganda, Rwanda, Burundi, iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo (DRC).
Dalxiisku wuxuu ka mid yahay aagagga dhaqaalaha ee muhiimka ah oo waddamada Afrika ay eegayaan inay horumariyaan, suuq galiyaan, oo horumariyaan barwaaqada qaaradda.
Madaxweyne Samia ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah ku tagtay Kenya bishii May ee sannadkan, kaddibna waxay wadahadallo la yeelatay madaxweynaha Kenya Mr. Uhuru Kenyatta, iyadoo lagu bartilmaameedsaday horumarinta ganacsiga iyo isu socodka dadka u dhexeeya labada dawladood ee dariska ah. Labada Masuul ee Dawladdu waxay si wadajir ah ugu heshiiyeen in la tirtiro caqabadaha hortaagan habsami u socodka ganacsiga iyo dadka u dhexeeya labada waddan ee Bariga Afrika ka dibna lagu dhiirri -geliyo dalxiisayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah inay booqdaan waddan kasta.
Waxay markii dambe ku amreen mas'uuliyiintooda inay bilaabaan oo soo gabagabeeyaan wadahadalada ganacsiga si loo xiro farqiga weyn ee u dhexeeya labada dal. Dhaqdhaqaaqa dadka waxaa kale oo ka mid ah dalxiisayaasha maxalliga ah, kuwa gobolka, iyo kuwa ajnebiga ah ee booqda Kenya, Tansaaniya, iyo dhammaan gobolka Bariga Afrika.